Iyunithi Lokulungiselela Isampula le-All-In-One UP200St_TD - iHielscher Ultrasound Technology
Idivayisi ye-watts engu-200 ye-ultrasonic UP200St_TD inikeza ukuxhumeka okubanzi njengoba leyunithi eyisisekelo ivumela amasuphu amathathu ahlukene ngokuphelele.
Uhlelo oluyisisekelo luqukethe i-top-down transducer UP200St_TD eqhutshwa i-generator ye-watt engu-200 (UP200St-G) isondeza amandla kagesi ngezinhlelo zokusebenza ezihlukahlukene ze-ultrasonic njengokuhlakazeka nokusabalalisa, ukulungiselela isampula, nokuhlehlisa. Omunye uhlelo oluyisisekelo lwe-ultrasonic olunamathuba amathathu wokusetha:
I-Ultrasonic Flow-Cell Reactor
SonoStep isampula yokulungiselela isampula
UP200St_TD SonoStep: I-Sample Preparation Unit
I-Small Volume Processing & Ukulungiselela Isampula ngaphambi kokuhlaziywa: Ukunikezwa kwe-Sonication, Ukugqugquzela nokuPula ngedivaysi eyodwa.
I-SonoStep idivayisi ephelele yokulungiselela isampuli esithembekile futhi ekhululekile. Imisebenzi emithathu ebalulekile ye-sonication eqhubekayo, ivuselela futhi iqhume ifakwe kudivayisi ehlanganisiwe. I-ultrasound, ne-pumpri centrifugal ihlanganiswe phakathi kwe-beaker ensimbi engenasici. Ngakho-ke, amaphampu we-SonoStep, avuselela futhi ahlalise isampuli ekubuyiseleni. Amapayipi okuxhumeka avumele ukuxhumana okuqondile kumadivayisi wokuhlaziya, isib. Izinhlelo zokulinganisa izinhlayiyana, ngezilinganiso eziningi ezinembile. Ama-mixs e-ultrasound, ahlakazeka, akhipha emulsifies, anciphisa okuphakathi ukuze isampula ihambelane futhi ifakwe ngendlela efanele uma ingena kudivayisi ehlaziya.
Ukugcina isikhathi sokulungiselela isampula: Amazinga wamandla avumela ukunikezwa kwengane eyinkimbinkimbi ngesikhathi esifushane, efana ne-sonication ngokuqondile nge-homogenizer ngenzuzo yokuthi i-SonoStep ihambisa isampuli esinikwe ngqo ngqo kudivayisi ehlaziya. Ukuxhumeka okuqondile kwe-SonoStep nge-hose noma ipayipi nedivayisi yokuhlaziya, isb for isilinganiso sezinhlayiyana, kusiza umsebenzi isimiso esibhedlela kakhulu.
Ngokubambisana ne-accessory TD_CupHorn, i-UP200St_TD iphenduka uphondo olunamandla lwe-ultrasonic cup. Isitsha sendebe siza nomnikazi we-vial for sonication of up to 5 eppendorf tubes.
Uphondo lwendebe lungasetshenziswa njengobhavu obunamandla obuphezulu be-ultrasonic bathing. Ngenkathi isampula igcwaliswa ngokuqondile ekhompheni yekomishi ukuze kube ne-sonication ngqo, uphondo lwekhobe lusetshenziswa njenge-ultrasonic bath bath for ultrasonication ngqo. Ngomnikazi we-vial, izimbiza ezifihliwe ezifika ku-5 (isib. I-Eppendorf tubes) zingacutshungulwa ekugwemeni ama-aerosol kanye nokungcola. Ngakho-ke, i-ultrasonic cup uphondo ithuluzi eliphelele ukuze sonicate amasampula oyinyumba noma pathogenic. Ivumela ukunikezwa kwe-simultane ngesikhathi esisodwa kwezimo eziyizigaxa eziningi ngaphansi kwezimo zenqubo efanayo.
Ultrasonic cup uphondo TD_CupHorn for sonication okukhulu kusuka angles ezahlukene. Phezulu ngakwesokudla: umnikazi we-vial for sonication of up to 5 eppendorf amashubhu. Ngesokudla ngakwesokudla: Okunamathiselwe kwesitembu se-Flow
SonoStep – I-ultrasonic isampula yokulungiselela isampula ye-pumping ehlanganisiwe, evuselelayo ne-sonication
I-UP200_TD ye-Flow-Cell Reactor
Ngokunamathiselwe kwe-cell cell, i-UP200St_TD isebenza njengendlela yokusetha kabusha ukulinganisa okuncane ukucubungula kwe-ultrasonic kwimodi eqhubekayo yokugeleza. I-UP200St_TD FlowCell ifakwe ngamapayipi amabili okuphakelayo we-2.5mm ububanzi obungaphakathi. I-reactor ingavalwa nge-lid ukuqinisekisa ukuthi inqubo evaliwe yendawo.
Sonication okuhambisanayo nefika ku-200 watts for isampula ukulungiselela.
Ukuxuba, ukuhlakaza nokuguqulwa kwamandla kanye nokuzikhethela ngamandla amakhulu e-ultrasonic
Akukho ukulahlekelwa kwesampula, akukho ukungcola okuphambene
Ukulungiswa kwesampula okungenakusebenza ngokusetha okulula nokusebenza kwedivaysi eyodwa
Iyunithi eyisisekelo ehambisanayo ivumela amasuphu amathathu ahlukene
Ukusetha okulula nokusebenza
Ukushesha okusheshayo-ukukhiya okusheshayo nokushintsha kalula kokunamathiselwe (SonoStep, FlowCell, CupHorn)
I-Quick-lock mechanism yokuhlanza okusheshayo nokulula
I-hose eguquguqukayo noma uxhumano lwepayipi
I-Basic Unit UP200St_TD
Esinye isici esihlakaniphile se-UP200St yindlela yokusebenza nokulawula nge-LAN (inethiwekhi yendawo, bheka ibhokisi elilungile) elenza umsebenzi usebenze futhi ivumela ukucubungula okuphezulu ukuguquguquka. Yonke imininingwane yenqubo ye-sonication ibhalwe ekhadini leDatha le-SD, ngokuzenzakalelayo. Inzwa ehlanganisiwe ilinganisa izinga lokushisa unomphela kodwa izibani ezimbili ezikhanyayo ze-LED zikhanyisa isampula esithandwayo.
I-ultrasonic izicubu ze-homogenizers ngokuvamile zibizwa ngokuthi i-sonicator yeprobe, i-sonificator, i-lyser ye-sonic, i-ultrasound ephazamisayo, i-grinder ye-ultrasonic, i-sono-ruptor, i-sonifier, i-sonic dismembrator, i-cell disrupter, i-ultrasonic disperser noma i-dissolver. Amagama ahlukene avela ezinhlobonhlobo zokusebenza ezingagcwaliseka nge-sonication.
I-UP200St TD_CupHorn ye-sonication engaqondile yamasampuli